रमेश र नन्दाको बिबाहमा कल्पना मण्डपमा पुग्नासाथ माहोल अर्कै बन्यो , रमेश र कल्पनामा के कुरा भयो त ? (भिडियो सहित) – Dainik Sangalo
रमेश र नन्दाको बिबाहमा कल्पना मण्डपमा पुग्नासाथ माहोल अर्कै बन्यो , रमेश र कल्पनामा के कुरा भयो त ? (भिडियो सहित)
December 8, 2020 708
जब कल्पना रमेशको बिहेमा पुगिन् तब सबै ध्यान कल्पनातिर गयो । कल्पनाले रमेशको बिहेमा निकै नै रमाईलो गरिन् । साथै उनले रमेशको बिहे खान गएका सबैलाई नै आफ्नो बिहेमा पनि आउनु भन्दै अग्रिम निम्तो दिएर पनि रमाईलो गरिन् । कल्पनाले बिहेमा नचाचेको धेरै भएको थियो भन्द्रै रमेश दाई र नन्दा भाउजुको बिहेमा धोको फेरेर नाच्ने पनि बताईन् ।
बिहेमा रातो लागउनु पर्छ भन्दै आफुले रातो लगाएको बताएकी कल्पना रातै रंगमा सजिएर बिहेमा पुगेकी थिईन् । उनले आफुलाई पनि रातो रंग नै विषेशगरी मन पर्ने भएको हुनलो र बिहेको माहोल भएको हुनाले रातै लगाएको बताईन् । रातो र गोल्डेन परिहरनमा कल्पना साँच्चिकै खुलेकी थिईन् । भिडियो
Prevभिडियोमा हेर्नुहोस् नायिका श्वेता खड्का र विजयन्द्रको बिहे,माइती छोड्दा धरीधरी रोइन् श्वेता, आफन्तको पनि रुवाबासी
Nextनेपालमा पति सबिनको मृ, त्युको खबरले साइप्रसमा रहेकी २३ वर्षे पत्निले त्या, गि, न् प्रा,ण